Antoine Griezmann ““Kama qoomameenayo go’aankii aan ku diiday Barcerlona” – Bandhiga
Antoine Griezmann ““Kama qoomameenayo go’aankii aan ku diiday Barcerlona”
Laacibka kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa sheegay inuusan ka qoomameynin inuu diiday dalabkii kaga yimid kooxda Barcelona, inkastoo uu ahaa go’aankii ugu adkaa ee mustaqbalkiisa ciyaareed.
Barcelona ayaa isku dayday inay lasoo saxiixato laacibka reer France ee Antoine Griezmann inta uu socday koobka aduunka iyagoo kasoo gudbiyay dhowr dalab laakiin laacibka ayaa ugu dambeyn go’aansaday inuu sii joogo kooxdiisa.
“Kama qoomameenayo inaan iska diido u dhaqaaqista kooxda Barcelona, wuxuu ahaa go’aankii iigu adkaa xirfadeyda kubada cagta”.
“Waxaan hurdada ka toosay 3-dii aroornimo si aan arintaan kala tashado xaaskeyga, waxaan weydiiyay waxaan sameyn karo, iyadana way awoodi weesay inay arintan igu caawiso”.
“Xaaskeygu ma garanaynin 100% waxa aan ka fikirayay, sida aabahay oo kale, qaar baa doonayay inay igu arkaan Atletico Madrid halka qaarka kalena ay doonayeen inaan u dhaqaaqo Barcelona, sidaas darteed wuxuu ahaa go’aanka ugu adag ee aan abid sameeyo”.
“Waxaan dooneynaa xili ciyaareedkan inaan u dagaalano horyaalka La Liga iyo sidoo kale Champions League”.